SAWIRO: Ku Dhawaad Hal Milyan Oo Taageerayaasha Liverpool Ah Oo Ciyaartoydooda Kula Xafaladeedyay Koobka Champions League Iyo Xafladii Man City Oo Lagau Maadsaday. - Gool24.Net
SAWIRO: Ku Dhawaad Hal Milyan Oo Taageerayaasha Liverpool Ah Oo Ciyaartoydooda Kula Xafaladeedyay Koobka Champions League Iyo Xafladii Man City Oo Lagau Maadsaday.
Kadib markii ay ciyaartoyda iyo shaqaalaha tababarka ee Liverpool ku soo laabteen halkii ay duulaanka kaga qaadeen Madrid ee magaalada Liverpool waxay heleen soo dhawayntii ugu waynayd ee ay koox kubbada cagta ahi heli kartay.
Boqolaal kun oo taageerayaasha kooxda Liverpol ah ayaa dariiqyada magaalada Liverpool buux dhaafiyay si ay ula xafladeeyaan ciyaartoyda kooxdooda ee koobkii lixaad ee Champions league ku soo guulaystay.
Dad lagu qiyaasay 750,000 oo taageerayaasha kooxda Liverpool ah ayaa buux dhaafiyay dariiqyada waxayna abuureen jawi aan hore loogu arag kubbada cagta taas oo keentay in Man City loogu maadsaday qaabkii ay ugu xafladeeyeen koobka Premier league.
Ku dhawaad hal milyan oo qof oo taageerayaasha Liverpool ahi ka qayb galeen dabaal degii iyo xafladayntii koobka Champions league waxay abuurtay muuqaalo iyo sawiro taariikhda gali doona kuwaas oo ay markale jamaahiirta Reds ku muujiyeen sababta loogu tilmaamo taageerayaasha ugu xamaasada badan.
Maayirka magaalada Liverpool ee Mayor Joe Anderson ayaa taageerayaasha kooxda Reds ee xafladaynta iskugu soo baxay ku qiyaasay in ay ahaayeen ilaa 750,000 kun oo qof taas oo muujinaysa sida ay magaalada Liverpool dhinaca kale ugu rogeen.
Jurgen Klopp, shaqaalihiisa tababarka iyo ciyaartoyda kooxda ayaa bas dusha ka furan soo saaray koobka UEFA Champions League waxayna dhex gaaf wareegayeen boqolaalka kun ee taageerayaasha ah ee iyaga awgood banaanka u buux dhaafiyay.
Jurgen Klopp ayaa si aan hore loogu arag Liverpool uga soo muuqday isaga oo si layaableh uga qayb qaadanayay heesaya iyo dabaal degayada jamaahiirta kooxdiisa waxaana isku soo baxday xamaasada Klopp iyo taageerayashiisa Reds.
Haddaba iyada oo ayna suurtogal ahayn in la soo wada gudbin karo sawirada layaabka lahaa ee aadka u badnaa ee laga qaaday xafladayntii Liverpool haddana qayb ka mid ah oo aanu idiinka soo qaadnay halkan kaga bogo.
Halyaygii hore ee Liverpool ahna khabiirka Sky Sports ee Phil Thomson oo la amakaagay isku soo bixii jamaahiirta kooxdiisii hore ee Liverpool ayaa macalinka Man City ee Pep Guardiola u diray fariin khaas ah.
Phil Thomson ayaa Guardiola xusuusiyay in marka koob loo xafladaynayo ay xafladayntu tahay waxa ay taageerayaasha Liverpool sameeyeen wuxuuna u qoray fariinta ah: “Guardiola taas ayaa ah xafladaynta koob”.